Abangu 17 abakhulelwe esikoleni esisodwa | isiZulu
Abangu 17 abakhulelwe esikoleni esisodwa
Yamukelwe eyamakhondomu ezikoleni
'Amakhondomu ngeke agqugquzele ucansi ezikoleni'
Mahikeng - Isikole samabanga aphakeme iBarolong High School, eMahikeng, sesicele abazali bezingane ezingu-17 ezikhulelwe ukuthi bahlale bemi ngomumo belindele ukubizwa esikoleni uma kwenzeka abantwana babo besikwa, kusho izindaba zeSowetan ngoLwesine.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo eNorth West uBayanda Zenzile utshele iphephandaba wathi abafundi abakhulelwe baseminyakeni ephakathi kuka-14 no-18 ubudala.
Kufika abezindaba, abanye abazali bebelinde ngaphandle kwesikole belindele ukusiza uma kwenzeka abantwana babo besikwa, uZenzile uthi bonke abazali bavumile ukuba wusizo uma kwenzeka bedingeka esikoleni.
Noma kunjalo abanye babazali bazwakalise ukungenami njengoba bekhale ngokuthi abanalo ulwazi olwanele lokuthi usizwa kanjani umuntu obelethayo, abanye bathi bazophuthelwa wumsebenzi.
Omunye wothisha utshele iphephandaba ukuthi ukhona umfundi owabelethela esikoleni, uthisha uthi ukukhulelwa kwabafudni kufaka ingcindezi njengoba abanye abafundi kwenzeka bazele, bezeliswa wumfundi ozothwele.